कविता बनिन् अन्तर्राष्ट्रिय डान्सिङ सुपरस्टार
निशान न्युज श्रावण १९, 2075
काठमाडौं । सर्लाहीकी १८ वर्षीया कविता नेपाली नेपालकै पहिलो डान्सिङ सुपरस्टार भइन् ।
एपीवान टेलिभिजनद्धारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय डान्सिङ रियालिटी सो ‘बुगीवुगी’को फाइनल राउन्डमा आफ्ना अन्तिम दुई प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उनले उक्त उपाधि चुमेकी हुन् । पाधिसँगै उनले नगद २५ लाख पनि जितिन् ।
दिनभर सिमसिमे पानी परिरहेको काठमाडौंको चिसोचिसो मौसम । बाहिरको सडक हिलाम्मे थियो । बुद्धनगरस्थित एपीवान टेलिभिजनको स्टुडियो भने सांगीतिक क्षेत्रका हस्तीहरूको उपस्थिति र नृत्यकारहरूको रौनकले गरमागरम बनेको थियो ।
सबैजना बुगीवुगी कार्यक्रमको टाइटल विजेता थाहा पाउन व्यग्र प्रतीक्षामा थिए । स्टुडियोमा रमाइलो माहोल छाएको थियो । त्यही रमाइलो माहोलकै बीचमा उनलाई नेपालकै पहिलो डान्सिङ सुपरस्टार घोषणा गरियो ।
प्रगति पुन फस्ट रनरअप बनेकी छन् । उनले ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेकी छन् । सरोज मोक्तान सेकेन्ड रनरअप बनेका छन् । उनले चार लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
बुगीवुगीका लागि अनलाइन अडिसनमार्फत देशभरबाट ३ हजार डान्सर सहभागी भएका थिए । तीमध्ये एक सय ५० जना डान्सरलाई दोस्रो राउन्डको अडिसनका लागि काठमाडौं बोलाइएको थियो । उनीहरू मध्येबाट १८ जना प्रतियोगी छानिए ।
अन्तिम राउन्ड दुई सातासम्म चलेको थियो । फाइनल विजेता घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धी प्रगति, कविता र सरोजका फ्यानहरूले उनीहरूको पक्षमा भोट गर्न विभिन्न कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेका थिए ।
करिब आठ महिनासम्म चलेको यो कार्यक्रमको निर्णायकमा अभिनेता दिलीप रायमाझी, अभिनेत्री प्रियंका कार्की र कोरियोग्राफर कविराज गहतराज रहेका थिए ।कार्यक्रमको सुरुआतदेखि नै प्रशान्त तामाङ, रोहिया महर्जन र नरेशवीर ठकुरीले कोरियोग्राफी गरेका थिए ।
कस्तो होला प्रमोद खरेलको ‘झुमा झुम्कावाली’ भर्सेज ‘झुमा झुमा’ ? हेर्नुस् भिडियो
काठमाडौं । चर्चित गायक प्रमोद खरेलले ‘झुमा झुम्कावाली’को सफलतापछि उदाउँदा गायक तथा संगीतकार भीम ब...
'विर विक्रम २' को पोस्टर रिलिज
काठमाडौं । मिलन चाम्स निर्देशित चलचित्र 'विर विक्रम २' को अफिसियल पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । जेठ ३...
स्वस्तिमाको 'कुटुमा कुटु' को नयाँ रेकर्ड, हेरियो १० करोड पटक
काठमाडौं । चलचित्र दुई रुपैयाँको गीत 'कुटुमा कुटु' ले सार्वजनिक भएको केहि दिनमै चर्चा बटुलेको थि...
किन रुचाइएन निया शर्माका यी फोटोहरु ? यस्तो छ कारण
मुम्बई । बलिउड कलाकार निया शर्मा ‘हट’ कलाकारमध्ये एक हुन् । यी नायिका सामाजिक सञ्जालमा पनि खुबै स...
काठमाडौं । अभिनेता अर्जुन कपूर र मलाइका अरोडाको जोडीले बलिउडमा हंगामा मच्चाएको छ। केहि समय पहिला ...
‘सारेगमप’ को टप ११ मा पुगे प्रितम र आयुष
काठमाडौं । बाल कलाकार आयुष केसी र प्रितम आचार्य भारतीय टेलिभिजन च्यालनबाट प्रशारण भएको रियालिटी क...
काठमाडौं । कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हु...
धनकुटा बेलहराका विद्यार्थीले गरे हवाई जहाजमा यस्तो मस्ती